I-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder (2446-23-3) ≥98% | I-powder powder
/ iimveliso / abanye / I-Oral Turinabol (Oral Tbol) ipowder
Akukho kalo SKU: 2446-23-3. Udidi: abanye
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder (2446-23-3), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Oral Turinabol (Oral Tbol) ividiyo ye powder
I-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Oral Turinabol (Oral Tbol) powder
Ifomula yeMolekyuli: C22H50
Ubunzima Ezinto: 314.63200
umbala: Phuma powder
I-Oral Turinabol (Orally Tbol) yokusetyenziswa kwepowder kumjikelezo we-steroids
I-Oral Tbol powder (Oral Turinabol powder) Amagama
I-Oral Turinabol powder ibizwa nangokuthi i-Oral Tbol powder (i-CAS 2446-23-3), i-OT, njalo njalo.
I-Oral Tbol powder (Oral Turinabol powder) Ukusetyenziswa
I-turinabol yomlomo isetyenziswa ngokuqhelekileyo ngomlomo. Kwindoda, ngokuqhelekileyo i-15mg-40mg ngosuku, ezingekho ngaphezu kwee-8 kweeveki; Kwababhinqa, ngokuqhelekileyo i-2.5-5mg ngosuku, ayikho ngaphezu kweeyure ze-6.
I-ORAL T-BOL iphuhliswe emva kwedanabol. I-Oral t bol ivumela ukuphuhliswa okukhulu ngaphandle kokubangela ukugcinwa kwamanzi njenge-danabol. Isenzo saso sihamba ngokukhawuleza kodwa uzuzo luzinzile. Ukulungiselela oku ku-anabolic kuyingqayizivele yokuqalisa imveliso yendalo ye testosterone, into yokuba umsebenzisi ekupheleni kwonyango unomlinganiselo ophezulu wentlama yemvelo. Kukulungele ukuqhubeka nokuhlakulela imisipha yakhe ngexesha elide.
I-chlorodehydromethyltestosterone, igama eliqhelekileyo kwi-brand ye-brand ye-Oral Turinabol, iyisiphumo esinamandla se-Dianabol. Le steroid yomlomo isakhela umnqamlezo phakathi kwe-methandrostenolone kunye ne-clostebol (i-4-chlorotestosterone), inesakhiwo esifanayo njenge-Dianabol kunye ne-4-chloro ishintsho ye-clostebol. Olu tshintsho lwenza i-chlorodehydromethyltestosterone ngumzala omdala wase-Dianabol, i-steroid entsha engabonakali nantrogenic kunye nomsebenzi ongaphantsi kwe-androgenic xa kuthelekiswa nomlingani wakhe odumile. Umsebenzi we-anabolic we-chlorodehydromethyltestosterone iyancinci kune-Dianabol ngokunjalo, kodwa uyagcina ibhalansi ye-anabolic ebonakalayo enomdla. Oku kuthetha ukuba kunoma yiphina inqanaba lomsebenzi wokwakha imisipha, i-chlorodehydromethyltestosterone ayiyi kuba lula ukuvelisa i-androgenic.
Inqanaba eliqhelekileyo lonyango le-Oral Turinabol liqikelelwa ukuba li-5 mg ngosuku; Izikhokelo ezicacileyo azifumaneki. Kwibala lezemidlalo, umlinganiselo osebenzayo womlomo wemihla ngemihla uwela kwibala le-15-40 mg, ethathwa kwiimjikelezo ezingapheli ngaphezu kwee-6-8 kwiiveki zokunciphisa i-hepatotoxicity. Eli nqanaba lanele ukwanda okwenyukayo kumzimba osisindayo kunye namandla. Le nkonzo isetyenziswe rhoqo njengephambi komncintiswano okanye i-steroid yokusika yeenjongo zokwakha umzimba, kwaye ayithathwa njenge-agent ekhwela ngokugqithiseleyo ngenxa yokungabi naso kwesantrogenicity. Abadlali bezemidlalo apho ijubane liba yinto ephambili ekufumaneni ngayo i-chlorodehydromethyltestosterone, ukufumana inzuzo enamandla ye-anabolic ngaphandle kokuba iqhube nayiphi na amanzi okanye amaninzi.
Ukusetyenziswa kwabasetyhini Amadoda
Inqanaba eliqhelekileyo le-clinical dose le-Oral Turinabol liqikelelwa ukuba li-1-2.5 mg ngosuku; Izikhokelo ezicacileyo azifumaneki. Kwibala lezemidlalo, abafazi baqhele ukuba bathathe i-5 mg tablet nganye ngosuku, bathathwe ngemijikelezo engekho ngaphezu kwee-4-6 kwiiveki zokunciphisa i-hepatotoxicity. Imiphumo emibi ingenakwenzeka kule nqanaba yokusetyenziswa. Amanani amaninzi aphezulu aqhele ukusetyenziswa kunye nabadlali bezemidlalo kwi-program yangaphambili ye-GDR yokutshatyalaliswa kwezinto, kodwa ngokuqhelekileyo ukuphazamiseka kwemiphumo emibi yegalelo.
Isiqingatha-zobomi kwiincwadi zenzululwazi emva kolawulo lwe-IV ngamaxesha e-16; Nangona kunjalo, isigamu somlomo esisemthethweni asikho enyeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ngokuqhelekileyo isigamu somsebenzi wokulawula ngomlomo sikhulu kunokuba kulawulo lwe-IV, nangona kunjalo, kule ngxaki ingaba yifutshane ngenxa yokupasa i-metabolism yokuqala kunye nokunciphisa izinga eliphezulu le-plasma xa kuthelekiswa ne-IV dose1. Olunye iphepha luchaza i-half-short-life1. Uqikelelo olungileyo ubuncinane ubuncinane kwiiyure ezisibhozo kwi-half-life of this steroid kunye nexabiso elibonakalayo phakathi kwe2 kunye neeyure ze-12. Inyaniso yokuba i-metabolites yeli steroid ingafumaneka kwixesha elide emva kokuphelelwa ukuphela kwexesha elide ixesha elide isigxina20.
Abasebenzisi baxelele ukunyanzeliswa okunamandla kwamanqanaba e testosterone ngelixa usebenzisa i-Oral Turinabol. Le steroid isifo esinobuthi kunobuthi kodwa mhlawumbi sinetyhefu nje kunezilinganiso ezilinganayo ze-methandrostenolone. Le steroid iyaziwa ngenxaxheba yayo kwiprogram yokuxhaswa yi-state exhaswa yi-state yangaphambili yase-East German. Esi sidakamizwa sanikwa abadlali bebhinqa nabasetyhini ngokukodwa ukunyusa ukusebenza kwezemidlalo kwiiOlimpiki. Nangona amadoda ayaphathwa, abafazi babejolise kuko baphendule bhetele ngakumbi kunyango. Imilinganiselo ye-10 kuphela kwi-20 mg ngosuku yenyuka ukunyuka okuphawulweyo ekusebenzeni kwabasetyhini. Le nkqubo iquka ezinye iziyobisi ezifana ne-mestanolone, uhlobo lwe-11-beta ye-Oral Turinabol, i-4-chloro-methyltestosterone, i-4-chloro-mestanolone, i-methandrostenolone, i-testosterone kunye ne-nandrolone esters kwakunye nezinye iindimenti ze-hormone. Nangona kunjalo, i-Oral Turinabol yayigxininiso kuba ibonakala ibhengeza iziphumo ezilungileyo ze4.
I-Oral Turinabol ibonise kwiminyaka yamuva kwimarike yangemuva nabantu abasebenzisa ngaphezu kwe-100 mg ngosuku. Kule dosi, umntu kufuneka azibuze ukuba imveliso iqulethe i-steroid echanekileyo okanye iphantsi kwesigxina okanye ukuba yinto enye "into engcono".
Isilumkiso kwi-Talol Oral Oral powder (CAS 2446-23-3)
Iziphumo zecala ze-Oral Turinabol zizinye zezona zinto ezincinci kunoma iyiphi i-anabolic steroid emhlabeni. Nangona kunjalo, siya kufumanisa ukuba ingaba nefuthe elinamandla, elibi kwipilo yempilo. Oku kufuneka kulawulwe umdala omdala kodwa kuya kuba yinto oyifunayo ukugcina iliso. Bobabini nababhinqa baya kuba nako ukusebenzisa le steroid.
Iziphumo eziPhakathi (Androgenic)
Nangona i-chlorodehydromethyltestosterone ihlelwa njenge-anabolic steroid, iziphumo zecala ze-androgenic zisenokwenzeka nale nto. Ezi zinokubandakanya utywala lwe-oily skin, acne, kunye nomzimba / ubuso beenwele. Amanani aphakamileyo kunokuba ayimiselwe ngokuqhelekileyo anokudala iziphumo ezinjalo. I-Anabolic / androgenic steroids inokunyusa ukulahlekelwa kweenwele zendoda. Abasetyhini bayongezwa ngokungekho ngeempembelelo ezinobungakanani be-anabolic / androgenic steroids. Ezi zingabandakanya ukuqiniswa kwelizwi, izitenxo zokusesikhathini, ukutshintsha kwesikhumba, ukukhula kwesikhumba, kunye nokwandiswa kweentloko. I-chlorodehydromethyltestosterone ayixilwanga ngokubanzi nge-5-alpha reductase enzyme, ngoko i-androgenicity yayo enxulumene nayo ayitshintshwanga kakhulu ngokusetyenziswa ngokufanayo kwe-finasteride okanye i-dutasteride
Iimpawu Zecala (I-Hepatotoxicity)
I-chlorodehydromethyltestosterone yi-c17-alpha alkylated compound. Olu tshintsho lukhusela isicatshulwa ekucimeni kwesibindi, okuvumela ipesente ephakamileyo kakhulu yokungena kweziyobisi kwigazi emva kokulawulwa komlomo. I-C17-alpha alkylated alboxylic / androgenic steroids ingaba yi-hepatotoxic. Ukutyhila ixesha elide okanye eliphezulu kunokubangela ukulimala kwesibindi. Kwiimeko ezinqabileyo iintsholongwane ezisongela ubomi zingaphuhlisa. Kucetyiswa ukutyelela ugqirha ngezikhathi ezithile kumjikelezo ngamnye ukujonga umsebenzi weesibindi kunye nempilo yonke. Ukufakwa kwe-c17-alpha alkylated steroids ixhaphake kwii-6-8 iiveki, ngenzame yokuphepha ukunyuka kwesibindi. Ukusetyenziswa kwesongezelelo se-footic detective ezifana ne-Liver Stabil, i-Liv-52, okanye i-Essentiale Forte isiluleko xa sithatha nayiphi na i-hepatotoxic anabolic / androgenic steroids.
Imiphumo engasemva (i-Cardiovascular)
I-Anabolic / androgenic steroids ingaba nemiphumo emibi kwi-serum cholesterol. Oku kuquka ukuthambekela ekunciphiseni i-HDL (emihle) yexabiso le-cholesterol kunye nokwandisa ixabiso le-cholesterol ye-LDL (embi), engayitshintsha i-HDL kwi-LDL ibhalansi kwindlela echaphazela umngcipheko omkhulu we-arteriosclerosis. Impembelelo enxulumene ne-anabolic / androgenic steroid kwi-serum lipids incike kwiqondo, indlela yokulawulwa (ngomlomo kunye nomjovo), uhlobo lwe-steroid (enokusetyenziswa okanye enokunakonakalisa), kunye nenqanaba lokumelana nomthamo we-hepatic metabolism. I-chlorodehydromethyltestosterone inefuthe elinamandla kwi-hepatic management of cholesterol ngenxa yobume bayo obungabonakaliyo, ukuchithwa kobunqamlezo kwintsholongwane yesibindi kunye nendlela yokulawula. I-Anabolic / androgenic steroids ingaphinda ichaphazele uxinzelelo lwegazi kunye ne-triglycerides, ukunciphisa ukuphumula kokuphela kwexesha, kunye nenkxaso yokushiya i-ventricular hypertrophy, yonke inokunyusa umngcipheko wesifo senhliziyo kunye ne-myocardial infarction.
Ukuncedisa ukunciphisa uxinzelelo lwe-cardiovascular ucebise ukuba ugcine inkqubo yokuzivocavoca ngesifo senhliziyo kunye nokunciphisa ukungena kwamafutha apheleleyo, i-cholesterol kunye ne-carbohydrates elula ngamaxesha onke ngexesha lolawulo olusebenzayo lwe-AAS. Ukuxhaswa ngamafutha eentlanzi (i-4 grams ngosuku) kunye ne-cholesterol yemvelo / ifom ye-antioxidant efana ne-Lipid Stabil okanye imveliso enezithako ezifanayo.
Iimpawu Zecala (iTechtosterone Suppression)
Zonke i-anabolic / androgenic steroids xa kuthatyathwa ngamanyathelo anele ukukhuthaza ukufumana i-muscle kulindeleke ukuba ikhusele i-testosterone yokugcina. Ngaphandle kokungenelela kwezinto ze-testosterone-stimulating substances, amanqanaba e-testosterone kufuneka abuyele kwiimeko eziqhelekileyo kwiinyanga ze-1-4 ze-drug secession. Qaphela ukuba i-hypogonadrophic hypocodadism enokude ikwazi ukuhlakulela ukusetyenziswa kakubi kwe-stroid, ukunyanzelisa unyango.
I-Oral Tbol powder Imiyalelo eyongezelelweyo
Ngaphandle kwemibuzo imiphumo ye-Oral Turinabol iya kuba yinto ebaluleke kakhulu kumdlali wezemidlalo kunye nomdlali we-athlete sithetha umdlali. Asikhulumi malunga nomzimba womzimba okanye umthambo wokuzivocavoca ohlala njengomnye kodwa ke umntu okhuphisana kwimidlalo yokhuphiswano. Ukusetyenziswa kwe-Oral Turinabol kuyakukhuthaza ngokunyanisekileyo ukunyamezela kwemisipha, abayi kukwazi ukukhawuleza ngokukhawuleza kwaye izinga labo elipheleleyo lokuphucula kufuneka liphuculwe kakhulu.
I-Oral Turinabol powder (i-CAS 2446-23-3)
I-Oral Tolol powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Oral turinabol powder (CAS 2446-23-3); uthenge i-Oral Tbol powder evela kwi-AASraw